မြင်တာနဲ့ ချက်ချင်းပြေး၀ယ်သင့်တဲ့ ဂျပန် ဆာကေး brand !!! - JAPO Japanese News
ကြာ 30 Jan 2020, 15:50 ညနေ
ဂျပန်အရက်ကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အရက်ချက်စက်ရုံကြီးတွေကအစ စက်ရုံငယ်လေးတွေအထိ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အရသာရော၊ ပစ္စည်း အရည်အသွေးတွေရော မတူကြဘူး။
အဲ့လိုမျိုး အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက် ဘယ်အမျိုးအစားက ၀ယ်ဖို့အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ နည်းနည်းခက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုပြောပြမယ် ဂျပန်အရက် ဆာကေးကိုတော့ တွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်းတောင် ပြေး၀ယ်သင့်ပါတယ်တဲ့။
ဒီထူးဆန်းတဲ့ ဂျပန်အရက် ဆာကေးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
စာဖတ်သူတို့ ဂျပန်ဆာကေးကို ကြိုက်ကြလား?
ဂျပန်အရက်ကတော့ ပြုလုပ်ရတဲ့ပုံတွေရော၊ အသုံးပြုထားတဲ့ ဆန်နဲ့ ရေနဲ့ လိုက်ပြီးတော့ အရသာက အမျိုးမျိုးကွဲသွားတာပေါ့။
ချိုတဲ့အရသာ တို့ သစ်သီးအရသာတို့ အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိပြီးတော့၊ တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ သောက်ကြည့်ပြီး အရသာ ညံ့တယ်လို့ မဆုံးဖြတ်လိုက်ဘဲ နောက်ထပ် တခြားအရသာတွေကိုလည်း မြည်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အရသာအစုံမသိသေးတဲ့ လူတွေအတွက်ကြတော့ ဘယ်ဟာကို၀ယ်ရမလဲ ဇ၀ေဇ၀ါဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီတစ်ခါတော့ “ မြင်တာနဲ့ ချက်ချင်းပြေး၀ယ်သင့်တဲ့အရက်” ဆိုတဲ့ ဒီထူးဆန်းတဲ့ ဂျပန်အရက်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။
ဂျပန်နိုင်ငံကို အလည်အပတ်ခရီးလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ထွက်တဲ့အချိန် ဒါလေးကိုတွေ့ရင် တွေ၀ေမနေဘဲ ချက်ချင်းပြေး၀ယ်လိုက်ပါ!!
နာမည်ကတော့ 菊姫　菊理媛（きくひめ　くくりめ）Kikuhime Kikirime ပါ။ Kanji ကိုလည်း သေချာလေးမှတ်ထားအုံးနော်!!
菊姫Kikuhime ဆိုတဲ့အရက်က တစ်ခြားအရက်တွေနဲ့ယှဥ်ရင် ရောင်းအားကောင်းပြီး၊ သောက်ရတာလည်း အဆင်ပြေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဆာကေးထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ပေါ့။
ဒီ 菊姫Kikuhime ဆိုတဲ့အရက်က သက်တမ်း ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာရှိနေပါပြီး။ မူလဂျပန်အရက်တွေဆို အဲ့လောက်ထိ သက်တမ်းကြာကြာမရှိပေမဲ့ ဒီအရက်ကတော့ ၁၀ နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အခုထိတိုင် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အရည်အသွေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
အရင်တုန်းကအရက်တွေဆို အနံ့တွေပျံ့ပြီး သိပ်ပြီးတော့မကောင်းဘူး။ အရက်ဆိုတာမျိုးက အနံ့ရော၊ အရသာပါ သေသေချာချာ ပြတ်ပြတ်သားသားရှိမှကောင်းတာ။ နောက်ပြီး အရသာစူးတဲ့ အမြည်းလေးတွေနဲ့ ဆို ပိုသောက်လို့ကောင်းတယ် ဟုတ် !?
စျေးကွက်ထဲမှာ 1.8 liters ကို ယန်း ၅ သောင်းပေး၀ယ်ရတယ်။
ဒါကတော့ ၂၀၁၁ ခုနစ်ရဲ့ International Wine Challenge မှာ ဂျပန်အရက်အနေနဲ့ Grand Prize ကိုရရှိခဲ့တဲ့ 鍋島 Nabeshima အရက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တံဆိပ်ကိုပြောင်းပြန်လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံက ဒီအရက်ရဲ့ ထူးခြားချက်ဖြစ်သလိုပဲ၊ ဂျပန်မှာ နံပါတ်တစ်ဖြစ်လာတဲ့ ဒီ鍋島 Nabeshima အရက်ရဲ့ အရသာကလည်း သူများနဲ့မတူဘူး ပိုပြီးကွဲပြားကောင်းမွန်တဲ့ အရသာရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားတွေမှာတော့ ဂျပန်အရက်တွေထဲက ချိုတဲ့အရသာကိုပဲ အရွေးများကြတဲ့အထဲက၊ သကြားဓါတ်ကို လျှော့ချထားတဲ့ “dry taste” လို့ခေါ်တဲ့အရသာနဲ့ ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ ဂျပန်ရှေးဟောင်အရက်ပါ။ မြင်တာနဲ့ ချက်ချင်းပြေး၀ယ်သင့်တယ်နော်…
ဒီအရက်က အခြောက်လှန်းထားတဲ့ ကမာကောင်နဲ့ဆို ကွက်တိပဲဗျ
စျေးကွက်ထဲမှာတော့ 1.8 liters ရှိတဲ့ ပုလင်းနဲ့ ယန်း၂ သောင်းလောက် ရှိပါတယ်။
田酒　純米大吟醸（でんしゅ　じゅんまいだいぎんじょう）Dennshu jyunmaidaikinnjyou
ဒါကိုတော့ အရက်ကြိုက်တဲ့လူတိုင်း သိကြတဲ့ 田酒 Dennshu လို့ခေါ်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စပါခင်းထဲကရလာတဲ့ အရက်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါ့။ အဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုင်းပဲ သူ့ကို ဆန်တစ်ခုထဲကနေဖောက်ထားတဲ့ ဆန်အရက်ပေါ့။ ပုံမုန် ဆန်အရက်တွေက တခြားဟာတွေမရောဘဲ ဆန်စေ့တွေကနေ ထုတ်ထားပေမဲ့၊ ဒီအရက်ကတော့ ဆန်ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ဖယ်လိုက်ပြီး ဆန်ရဲ့ အဓိကအတွင်းပိုင်ကိုပဲယူထားလို့၊ ဒီအရက်ကတော့ လုံး၀သန့်စင်တဲ့ ဆန်အရက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဂျပန်အရက်ပုလင်းတွေ ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ဆိုင်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွေးချယ်ပြီး ၀ယ်နိုင်သွားပေမဲ့၊ ဆန်ရဲ့ အလယ်ဗဟိုအစေ့ ကနေဖောက်ထားတဲ့ ဒီအရက်ကိုတော့ပိုပြီး သောက်ကြည့်စေချင်တယ်။
ဆန်အစေ့ရဲ့ အပေါ်မျက်နှာပြင်တွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ အထဲကသန့်စင်နေတဲ့ အပိုင်းကနေဖောက်ထားလို့ အရသာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
သူ့ကိုချက်ရတာ လက်၀င်တာတို့၊ စျေးကြီးတာတို့ ရှိပေမဲ့လည်း သောက်ရတာတော့ တကယ်ကိုအဆင်ပြေပြီး အရသာရှိတယ်ဗျ
သူလည်းပဲ 1.8 liters ပုလင်းကို ယန်း ၂ သောင်းပါ။
而今　純米大吟醸（じこん　じゅんまいだいぎんじょう）Jikonn jyunmaidaiginnjyou
ဒီတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးမယ့်အရက်ကတော့ 而今Jikonn လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူလည်းဆန်အရက်ပဲပေါ့။
တခြားဆန်အရက်ကတော့ ထုတ်လုပ်သူရဲ့ သဘောအတိုင်း ဆန်းသစ်ပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ而今Jikonn ဆန်အရက်ကတော့ သေသေချာချာတွက်ချက်ပြီး လုပ်ရတယ်။
ခေတ်သစ်ဂျပန်အရက်ကို ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာ ဒီ ဆာကေး လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူကသောက်ရတာလည်း အရသာရှိတယ်၊ အဆင်ပြေတယ်၊ နောက်ပြီး အရက်မကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကပါ လိုက်ပြီးသောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့….?
သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အမြည်းလေးကတော့ ကမာကောင်အခြောက် လိုမျိုး အရသာစူးပြီးငန်ငန်လေးပေါ့။
သူကတော့ 1.8 liters ပုလင်းကို ယန်း ၅ သောင်းကျပါတယ်။
千代の亀　純米大吟醸　銀河の紙ふうせん（ちよのかめ　じゅんまいだいぎんじょう　ぎんがのかみふうせん）
နာမည်ကတော့ တော်တော်လေးရှည်တယ်နော်. ふうせん fuusenn လို့ခေါ်မယ်။
သူကတော့ မိန်းကလေးတွေ ကြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့ ပုလင်းပုံစံလေးပါ
သူကိုပိုးသတ်ဆေးလုံး၀မသုံးထားတဲ့ ဆန်ကနေပဲ ချက်ထားတာပါ။ ဒီဆာကေးကတော့ အေးတဲ့နေရာမှာဆို ၁၄ နှစ်လောက်အကြာ အထားခံပါတယ်တဲ့..။ ပုလင်းရဲ့ ဒီဇိုင်းလေးကလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်၊
ဒါပေမဲ့ ပြုလုပ်ပုံက နည်းနည်း အလုပ်ရှုပ်တယ်။ ဒီဆာကေးမှာ alcohol ရာခိုင်နှုန်းက များတယ်။ စိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းတာက သူကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအမြှုပ်လေးတွေနဲ့သောက်ရင် ပိုပြီးပြည့်စုံသွားတယ်တဲ့..။
စျေးကွက်ထဲမှာတော့ 500mlကို ယန်း ၃ သောင်း ၃ ထောင် ရှိပါတယ်။
十四代　超特選（じゅうよんだい　ちょうとくせん）jyuyondai
၀ယ်ချင်ရင်တော် တော်တော်လေးကို ရှာယူရမယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာသတွေကြားမှာ ဒီဆာကေးရဲ့ နာမည်ကိုရော ကြားဖူးတဲ့သူရှိလား?
十四代 jyuyondai ဆိုတဲ့ ဂျပန်ဆာကေးကတော့၊ သူ့ရဲ့ စျေးနှုန်းနဲ့ အရည်အသွေးကြောင့် ရှာ၀ယ်ဖို့တောင်ခက်ခဲမယ် လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒီဆာကေးရဲ့ အရသာက ချိုမြမြလေးမို့၊ အသားဟင်းတွေနဲ့တွဲလိုက်ရင် အရသာရှိပေမဲ့၊ အမြည်းအရသာက ပြင်းရင်၊ သူရဲ့အရသာကို ပျက်သွားစေတယ်။
ဒါကြောင့်အမြည်းအနေနဲ့ကတော့ ဆားနဲ့ပဲပြုတ်ထားတဲ့ အသားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အဲ့လိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပဲ လိုက်တယ်။ စျေးကွက်ထဲမှာသူကတော့ 1.8 liters ကို ယန်း ၈ သောင်း ၃ ထောင်ရှိပါတယ်။
黒龍　石田屋（こくりゅう　いしだや） Kokuyuu ishidaya
石田屋ishidaya ကတော့ Fukushima ခရိုင်ရဲ့ ဒေသထွက်အရက်ပေါ့။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ စက်ရုံကပျက်စီးမှုတွေကြုံတွေရပြီး၊ ဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လည်း ၂ ကြိမ်ဆက်တိုက် ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပေမဲ့၊ သူက အကောင်းဆုံးနဲ့ နေရာပြန်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။
သူ့ရဲ့ ချိုမြမြအရသာလေးနဲ့ကတော့ sashimi နဲ့ အလိုက်ဆုံးပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
720mlကိုတော့ ယန်း ၃ သောင်း ၇ ထောင်းကျပါမယ်။
黒龍　二左衛門（こくりゅう　にざえもん） Kokuyuu nizaemonn
ဒီတစ်ခါကတော့ အမည်းရောင်နဂါးကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ အခုနပြောပြသွားတဲ့ 石田屋 Ishidaya ဆာကေးနဲ့ယှဥ်ရင်တော့ သူကအရာသာပြင်းတယ်။ သူနဲ့လိုက်တာကတော့ ရှာလကာရည်နဲ့စိမ်ထားတဲ့အမြည်းပါ။
720ml ကို ၃ သောင်း ၃ထောင် ယန်းပါ။
継　純米大吟醸（つぐ　じゅんまいだいぎんじょう）
朝日酒造 Asahishuzo ဆိုတဲ့ အရက်ချက်စက်ရုံကို ဂျပန်ရောက်ဖူးသူတွေသိမလားတော့ မသိဘူး။ 新潟 Niigata ခရိုင် မှာရှိပြီးတော့၊ အကောင်းဆုံး ဂျပန်အရက်အနေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းလုံးကတောင် အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ နာမည်ကြီး 久保田（くぼた）Kubota brand ကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စက်ရုံပါ။ အဲ့ဒီစက်ရုံမှာ 久保田 Kubota ဆာကေးထက်ကောင်းတာကတော့ အခု မိတ်ဆက်ပေးမယ့် 継 つぐ Tsugu ဆိုတဲ့ ဆန် ဆာကေးအရက်ပါ။
ဒီဆာကေးက ဆန်အနံ့လေးကိုသင်းနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကတော့ အမြည်းတွေကိုတောင် မစားဖြစ်ဘူး။ သူ့ရဲ့ အနံ့နဲ့ အရသာကိုပဲ သောက်နေရတာကိုက ပြီးပြည့်စုံသွားတာမျိုး………
ကဲ. ဒီအရက်လေးကတော့ ၂၀၀၈ ခုနစ် Hokkaido ခရိုင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ 洞爺湖（とうやこ）Summit မှာ ဂုဏ်ယူရတဲ့ အရက်အနေနဲ့ ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။
သူ့အတွက်အမြည်းကတော့ အနောက်တိုင်းစတိုင် Seafood တွေနဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်။
特別大吟醸　朱金泥能代　醸蒸多知（とくべつだいぎんじょう　しゅこんでいのしろかむたち）
ဂျပန်လူမျိုးတောင်မှ နာမည်ကိုမနဲဖတ်ရတဲ့ အရက်ပါ။ သူက တစ်နှစ်မှာ အလုံး ၆၀ ပဲထုတ်တဲ့ ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းကတောင် သဘောကျတဲ့ ဆာကေးပါ။
၁ ခွက် အပြည့်ကိုပဲ 10,000円 ယန်းတဲ့။ အာ့ဆိုရင်တော့ ၁ လုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ မမေ့ပါနဲ့တော့။
သူကတော့ ပြိုင်ဘက်ကင်း ဆာကေးလို့ပြောရင်လည်း မမှားဘူး။ ဂျပန်မှာရှိပါတယ်။
1.8 liters ကို 110,000円(ယန်း ၁၁ သောင်း)
ကဲ iPhone တစ်လုံးတောင် ၀ယ်လို့ရတယ်နော် !!
ဂျပန် ဆာကေး brand တွေကို သဘောကျတဲ့ လူတစ်ယောက်လောက် Challenge လုပ်ကြည့်မလား??
အဲ့လိုလိုက် ရှာ၀ယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုလည်း ခေါ်လိုက်နော်..(ရယ်လျက်) !!!
ဝီစကီတစ်လုံးတည်းနဲ့ ယန်း 31,500,000 မြတ်နိုင်ပါ့မလား။
ဘာသောက်ရင်ကောင်းမလဲ ? ? ?